Rights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges ဒေ၀ဒတ်၏ တပည့်ကျော်ကြီး ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှု ကမ္ဘာကျော်သွားလေပြီ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeRights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges ဒေ၀ဒတ်၏ တပည့်ကျော်ကြီး ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှု ကမ္ဘာကျော်သွားလေပြီ
Rights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges ဒေ၀ဒတ်၏ တပည့်ကျော်ကြီး ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှု ကမ္ဘာကျော်သွားလေပြီ
May 28, 2017 May 28, 2017 drkokogyi
ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှု ကမ္ဘာကျော်သွားလေပြီ
World News | Sat May 27, 2017 | 10:27am EDT (VIDEO) ဆောင်းပါး။
ကမ္ဘာသတင်းရေးရာ၊ စနေနေ့ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၁ရခုနှစ် နံနက်၁၀ နာရီ ၂၇ မိနစ်တွင် တည်းဖြတ်
Rights group calls on Myanmar to probe alleged military abuse after beatings video emerges
လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များမှ မြန်မာစစ်တပ်က နှိပ်စက်ရိုက်နှက်နေသော ရုပ်သံဗွီဒီယိုပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် မြန်မာအစိုးရအား သက်သေတခုခု အခိုင်လုံ အထင်ရှားပြရန် တောင်းဆို
By Wa Lone and Yimou Lee | YANGON
သတင်းပေးပို့သူ…၀လုံးနှင့် ရီမွန်လီ (ရန်ကုန်)
Human rights advocates called on Myanmar to investigate the actions of some of its soldiers on Saturday after footage of people being treated violently by uniformed men went viral.
လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များမှ မြန်မာ အစိုးရအပေါ် အရပ်ဝတ်ဖြင့် လက်နက်မပါသော အရပ်သားများအား ကြမ်းတမ်း ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်ကန်ကျောက်နေသော စနေနေ့တွင် ရုပ်သံဖိုင်သက်သေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့ဝင်၏ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်သည်များကို အရေးယူ စုံစမ်းပေးရန် တောင်းဆိုကြလေသည်။
Myanmar’s armed forces have often been accused of abuses by human rights groups and Western governments during decades of conflict with myriad ethnic armed groups.
မြန်မာ့တပ်မတော် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် မရေတွက်နိုင်သော တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသည့် ဒေသနှင့် အဆိုပါ ဆယ်စုနှစ်များစွာသော ကာလများတွင် အလွန်တရာ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးကျယ်ချိုးဖေါက်မှုများ ရှိနေကြောင်း လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် အနောက်နိုင်ငံ အစိုးရများမှ မကြာခန စွပ်စွဲပြောဆိုနေခဲ့လေသည်။
The footage, which was posted on Facebook early on Saturday, surfaced as some of the country’s armed rebel groups gathered in the capital, Naypyitaw, foranew round of peace talks with Myanmar leader Aung San Suu Kyi afteratough first year in power for her that saw the worst fighting with rebels in years.
ယခုထွက်ပေါ်လာသော ရုပ်သံဖိုင်အရ အဆိုပါ ရုပ်သံဖိုင်သည် တကယ်ပင်အာဏာရခဲ့မှု့ ပထမ တနှစ်ပြည့်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော အခြေနေအတွင်း လက်နက်ကိုင် သပုန်များနှင့် အဆိုးဆုံး တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ခဲ့ရပြီးနောက် ..လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင် စနေနေ့က ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး နေပြည်တော် ဟု ခေါ်သော မြန်မာပြည်၏ မြို့တော်တွင် တိုင်းပြည်အတွင်းမှ လက်နက်ကိုင် သူပုန်ခေါင်းဆောင်များစုဝေး၍ မြန်မာ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အသစ်တဖန်ပြန်လည် ကျင်းပနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံညိုနိုင်း စကားပြောနေသော ကာလ၀ယ် ပေါ်ထွက်လာသော ရုပ်သံ ဖိုင်လည်း ဖြစ်လေသည်။
The footage appeared to show several members of Myanmar’s military beating and kicking three men as at least six unidentified men were handcuffed and questioned.
အဆိုပါ ရုပ်သံဖိုင်မှာ အဖွဲ့ဝင်တော်တော်များသော မြန်မာ့တပ်မတေ်ာမှ အမည်အတိကျပြော၍မရနိုင်သော ယောက်ကျား(၆)ဦးအား လက်နောက်ပြန်လက်ထိပ်ခပ်ပြီး မေးခွန်းမေးမြန်းနေစဉ်အတွင်း ယောက်ကျားသုံးဦးအား ခြေဖြင့်ကန်ခြင်း ရိုက်နက်ခြင်းများကို ထုတ်ဖေါ်တင်ပြထားသော ရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်လေသည်။
The video showed soldiers kicking men in the face on the ground as well as holdingamachete toaman’s throat.
၄င်းရုပ်သံ အတွင်း မြေပေါ်တွင် ယောက်ကျားများ၏ မျက်နှာကို စစ်သားများမှ ကန်ကျောက်နေခြင်းနှင့် ယောက်ကျားတစ်ဦး၏ လည်ပင်းအား ထက်ရှသော ဓားဖြင့် ချိန်ရွယ် ထောက်ထားသော အဖြစ်ပျက်များကို တင်ပြထားခဲ့လေသည်။
Some of the handcuffed men were questioned as to whether they belonged to the Ta’ang National Liberation Army (TNLA), an ethnic armed group based in Myanmar’s eastern Shan State which recently clashed with the military.
လက်ထိပ်ခပ်ခံထားရသော ယောက်ကျားသားများအချို့သည် တအန်းပလောင် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်နေသလားဟု မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း ခံနေရသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ၊ အဆိုပါ အဖွဲ့သည် လောလောဆယ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် ထိပ်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်နေသော လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လေသည်။
ရပ်တာသတင်းဌာနမှ အဆိုပါရုပ်သံအတွင်း ပါဝင်နေသော သူများ၏ အသေးစိတ်အချက်လက်များကို လွတ်လပ်စွာ အတည်ြပုရန်မဖြစ်နိုင်သော အခြေနေတွင်ရှိနေခဲ့လေသည်။ အဆိုပါရုပ်သံသည် မည်သည့်အချိန်က မည်သို့သောနေရာတွင် ရိုက်ကူးထားသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
Matthew Smith, founder of campaign group Fortify Rights, identified the uniform as Myanmar army’s.
မက်သူ စမစ် ဆိုသော ဖေါ်တီးဖိုင်း ရိုက် ( အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အင်းအားစု) အဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူ အကြီးကဲမှ မြန်မာ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဟု မြန်မာ စစ်ဝတ်စုံများ ၀တ်ထားသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းကို အတိလင်းဆိုလေသည်။
“The Myanmar authority should immediately investigate this footage, and with urgency the authority should determine the well-being and whereabouts of the men detained in the footage,” he said.
မြန်မာ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ချက်ခြင်း မဆိုင်းမတွပင် ၄င်းရုပ်သံဖိုင်အား စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်သင့်ကြောင်းနှင့် အဆောတလျင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ခုပြုလုပ်ဖွဲ့စည်း၍ သေချာခိုင်မာကောင်းမွန်သော စုံစမ်းမှု တခုပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်းအပြင် ရုပ်သံဖိုင်
လက်ရှိ နှိပ်စက်ခံရသူများအား မည်သည့်နေရာတွင် ထိမ်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြ၇န် ပြောဆိုထားလေသည်။
Myanmar State Counselor’s Office and military did not immediately respond to requests for comments.
မြန်မာ့အတိုင်ပင်ခံရုံးနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတို့မှ အဆိုပါ အကြံပေးတောင်းဆိုချက်အား ချက်ခြင်း အကြောင်းမပြန်ပဲ ရှိနေခဲ့လေသည်။
A coalition of four rebel groups comprising some of Myanmar’s most powerful militias, including the TNLA, staged attacks on security forces in the north of the country in November.
တအန်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အပါဝင် မြန်မာပြည်တွင် အင်းအားကောင်းသော တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် လေးခုမှ တစ်ခုတည်းအဖြစ် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားခဲ့သော ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ လွန်ခဲ့သော နိုဝင်ဘာလအတွင်း တိုင်းပြည်၏ မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အင်အားစုအဖွဲ့အား တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလေသည်။
Earlier this year, Myanmar investigated policemen after footage of villagers being treated violently appeared online amid tension overagovernment crackdown aimed at rooting out suspected insurgents.
ယခုနှစ် အစောပိုင်းကာလအတွင်း သံသယရှိသော လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများအား ပစ်မှတ်ထား ချေမှုန်းရာတွင် အစိုးရ၏ တင်းမာသော ချေမှုန်းမှုများကို သရုပ်ပြထုတ်ဖေါ်ထားသော လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ ရွာသားများအား ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းသော ပြုမူဆောင်ရွက်ကိုင်တွယ်သည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးအား ပြုလုပ်ခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား မြန်မာ အစိုးရမှ စုံစမ်း စစ်ဆေမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း ဖေါ်ပြထားလေသည်။
တည်းဖြတ် Toby Chopra တိုဘီ ကိုပရာ
← It is funny that successive Myanmar Buddhist Anti-Islam organisations keep-on insulting Muslims by calling with the derogatory term, Kalar but their associations need to use the Kalar words
Wife of military chief wishes ‘best of luck’ to jailed USDP supporter →